I-Villa Insolia-Stanza Bougainvillea / Bougainv. Igumbi - I-Airbnb
I-Villa Insolia-Stanza Bougainvillea / Bougainv. Igumbi
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguMauro
Indlu (entsha kraca) ikwindawo entle yaseSanta Maria Salina (phantsi kwesitrato esikhulu kwaye ikwindawo yabucala ukwenza uninzi lokuthula kwesi siqithi simnandi, ngaphandle kokunikezela, kwangaxeshanye, ubuhle obuqhelekileyo bobusuku be-Aeolian). Ulwandle lufikeleleka ngokulula ngendlela yabahambi ngeenyawo ngaphantsi kwemizuzu emi-3. Indawo ikwafanelekile ekufikeni nasekuhambeni, kuba yimizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka eSanta Maria hydrofoil. ISIXHOSA INGCACISO NGEZANSI
Igumbi linekhitshi lohlobo lwe-Aeolian, elinokusetyenziswa kuphela ziindwendwe zegumbi le-bougainvillea. Indlu yokuhlambela, kwisitayile saseSicilian, ikufuphi (iqhotyoshelwe nje) kwigumbi (kufuneka ushiye igumbi kwaye ungene kumnyango wokuhlambela phambi kwayo - kwizindlu zakudala zaseSicilian igumbi lokuhlambela lalihlala libekwe ngaphandle kwendlu -). Akukho bhedi yesiqhelo kodwa ibhedi yesofa ephindwe kabini (intofontofo kakhulu).
Igumbi linomnyango ozimeleyo.
Indlu ekwisitayile esihle se-Aeolian inegadi yabucala yeMeditera enokuthi isetyenziswe ngokukhululekileyo ziindwendwe ngexesha lokuhlala kwazo.
N.B. igadi yeMeditera kunye nepatio yokungena nayo ingasetyenziswa zezinye iindwendwe zamanye amagumbi amathathu kumgangatho ophantsi. Akukho intanethi ye-WIFI.
QAPHELA: IGUMBI IYAQESHWA AYIYONKE I-Villa.
Igumbi lixhotyiswe ngekhitshi kwisitayela se-Aeolian, esisetyenziswa ngokukodwa ziindwendwe zegumbi le-bougainvillea. Igumbi lokuhlambela, kwisitayile saseSicilian, likufuphi negumbi kodwa lingahambelani (kufuneka ushiye igumbi kwaye ungene kumnyango wokuhlambela ochaseneyo - kwizindlu zakudala zaseSicilian ngokufuthi igumbi lokuhlambela lalibekwe ngaphandle kwendlu -). Akukho bhedi yesiqhelo kodwa ibhedi yesofa ephindwe kabini (intofontofo kakhulu).
QAPHELA: QESHA IGUMBI HAYI I-villa yonke.
Indlu ibekwe kwindawo entle yaseSanta Maria Salina (phantsi kwesitrato esikhulu kwaye kwindawo yabucala ukonwabela ukuthula kwesi siqithi sihle, unganikezeli, kwangaxeshanye ukuya kubomi basebusuku be-Aeolian obunqabileyo). Ulwandle lufikeleleka lula ngeenyawo ngaphantsi kwemizuzu emi-3. Isikhundla sikwafanelekile ekufikeni nasekuhambeni, ukuba yimizuzu eyi-10 yokuhamba ukusuka kwi-Santa Maria hydrofoil.
- Kumda okufutshane wendlu kukho iindawo zokutyela ezintle ezikhethekileyo kwi-Aeolian cuisine (kodwa hayi kuphela). Indawo yaseSanta Marina yenye yezona zinto zisikhathazayo kwesi siqithi kwaye awuzukuba nesithukuthezi, ukuba oku kuyenzeka ngaphantsi kwemizuzu emi-3 uhamba ukusuka endlwini kukho iimoto ezininzi, imoped, ibhayisekile kunye nephenyane onokuthi ngalo ngokulula. tyelela emagumbini onke olunye siqithi.
- Kumda okufutshane wendlu kukho iindawo zokutyela ezibalaseleyo ezigxile kwi-Aeolian cuisine (kodwa hayi kuphela). Indawo yaseSanta Marina yenye yezona zinto zicebisayo kwesi siqithi kwaye awuyi kuba nesithukuthezi, ukuba oku kunokwenzeka ukuba kwenzeke ngaphantsi kwemizuzu emi-3 uhamba ukusuka endlwini kukho iirenti ezininzi zeemoto, ii-scooters, iibhayisekile kunye nezikhephe onokuthi uzisebenzise. lula ndwendwela zonke iimbombo olunye siqithi.
Umbuki zindwendwe ngu- Mauro